विश्वभर ४ लाख ६४ हजारको मृत्यु, के छ सार्क राष्ट्रको अवस्था? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार विश्वभर ४ लाख ६४ हजारको मृत्यु, के छ सार्क राष्ट्रको अवस्था?
विश्वभर ४ लाख ६४ हजारको मृत्यु, के छ सार्क राष्ट्रको अवस्था?
विश्वभर ८७ लाख ६९ हजार ३ सय ८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको आइतबार बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा सर्वाधिक २२ लाख ५४ हजार ६ सय ६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
त्यस्तै, ब्राजिलमा १० लाख ३२ हजार ९ सय १३, रुसमा ५ लाख ७६ हजार १ सय ६२, भारतमा ३ लाख ९५ हजार ४८, बेलायतमा ३ लाख ४ हजार ५ सय ८० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
विश्वभर ४ लाख ६४ हजार २९ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा सर्वाधिक १ लाख १९ हजार ७ सय १९ जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै, ब्राजिलमा ४९ हजार ९ सय ७६, बेलायतमा ४२ हजार ६ सय ७४, इटालीमा ३४ हजार ६ सय १०, फ्रान्समा २९ हजार ६ सय ३६, स्पेनमा २८ हजार ३ सय २२ जनाको मृत्यु भएको छ।
विश्वभर ३४ लाख ४७ हजार ५ सय ८४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या अमेरिकामा सर्वाधिक ६ लाख १७ हजार ४ सय ६० छ। त्यस्तै, ब्राजिलमा ५ लाख ७६ हजार ७ सय ७९, रुसमा ३ लाख ३४ हजार २४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्।
नेपालमा पनि ८ हजार ६ सय २१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा मात्रै आइतबार बिहान १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। तीमध्ये १ हजार ५ सय ७८ संक्रमणमुक्त भएका छन् भने २२ जनाको मृत्यु भएको छ।
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या भारतमा ३ लाख ९५ हजार ४८ पुगेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या १३ हजार २ सय ७७ पुगेको छ। भारतमा हालसम्म २ लाख २८ हजार १ सय ८१ संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्।
पाकिस्तानमा हालसम्म १ लाख ७१ हजार ६ सय ६६ जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमितमध्ये पाकिस्तानमा ३ हजार ३ सय ८२ जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा हालसम्म ६३ हजार ५ सय ४ जना उपचारपछि निको भएका छन्।
श्रीलंकामा संक्रमितको संख्या १ हजार ९ सय ५० छ। संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या ११ छ भने निको हुनेको संख्या १ हजार ४ सय ७२ छ।
बंगलादेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ८ हजार ७ सय ७५ पुगेको छ। बंगलादेशमा हालसम्म १ हजार ४ सय २५ जनाको मृत्यु भएको छ। उपचारपछि निको हुनेको संख्या बंगलादेशमा ४३ हजार ९ सय ९३ छ।
अफगानिस्तानमा संक्रमितको संख्या २८ हजार ४ सय २४ पुगेको छ। अफगानिस्तानमा ५ सय ६९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ८ हजार २ सय ९२ जना उपचारपछि निको भएका छन्।
भुटानमा संक्रमितको संख्या ६८ पुगेको छ। उपचारपछि निको हुनेको संख्या २८ छ।
माल्दिभ्समा संक्रमितको संख्या २ हजार १ सय ८७ छ। मृत्यु हुनेको संख्या ८ छ भने उपचारपछि निको हुनेको संख्या १ हजार ७ सय ८८ पुगेको छ।
होटल खुलेपनि ग्राहक सुन्य
करेन्ट लागेर कपिलवस्तुको बुद्धभूमिका एक युवकको मृत्यु भएको छ ।